Maamulka Gobolka Banaadir Oo Guryo Dudumiyey:-(Sawiro) – hareerley
Maamulka Gobolka Banaadir Oo Guryo Dudumiyey:-(Sawiro)
July 11, 2019 Daadir	0 Comments
Ciidamada Ilaalada deegaanka iyo Waaxda Nadaafada Dowladda Hoose ee Maamulka Gobolkan Banaadir ayaa xalay waxaa ay siwadajir ah howlo burburin iyo nadaafad ah uga sameeyeen goobo Ganacsi oo ku yaalla wadada Maka-Almukarama ee Magalada Muqdisho.
Howlaha burburinta ayaa waxaa sigaar ah looga sameeyay Hareeraha wadada Maka-Almukarama,waxaana Ciidamada Ilaalada deegaanka ay burburiyeen Sandaqado iyo miisas yaryar oo dad ay Ganacsiyo ka sameysteen,waxaana Maamulka Gobolka Banaadir uu sheegay inay sharci darro tahay ku Ganacsiga hareeraha Wadada.
Intii ay socdeen howlaha burburinta ayaa waxaa halkaasi tegay guddoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir ahna Duqa Magalada Muqdisho Eng Yariisow,isaga oo sheegay in Maamulka Gobolka Banaadir uu doonayo dib u soo celinta bilicda Caasimadda.
Gudodomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Eng Cabdirxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa sheegay in laga bilaabo km4 ilaa Ex-Koontorool Afgooye ee wadada Maka Almukarama ay tahay sharci darro in wadada laamiga ah qeybo ka mid ah lagu Ganacsado.
Waxaa uu sheegay in Ganacsiga iyo wasaqda ka dhalata ay keeni karto nadafaad darro iyo cuduro kala duwan,waxaana Duqa Muqdisho Eng Cabdirxmaan Cumar Cismaan Yariisow uu digniin u diray dadka ku Ganacsada hareeraha Wadada Maka Al-Mukarama oo qaarkood Ganacsigooda soo geliyay qeyb ka mid ah wadada.
← Galkacyo Oo Shabahda Magaalada Baarliin:-(Akhriso)
Xulka Nigeria oo iska xaadiriyey Afar dhammaadka Koobka qarammada Afrika 2019 kaddib markii ay Garaaceen South Africa :-(Sawiro) →
Newly appointed US Ambassador to Turkey Satterfield arrives in Ankara0 45
Wafdi heer Federaal iyo Heer Gobol ka kooban ayaa maanta gaaray deegaanada sabiid iyo caanoole Ee Gobolka Shabeellada Hoose:-(Sawiro)0 45
Kooxo hubeysan Oo Wiil Ganacsade ahaa ku Diley Dalkaasi Koofur Afrika0 45
Puntland oo qoonsatay Kheyre oo tagay waqooyiga Gaalkacayo0 45
Mashruuca aan dhamaan Ee Dad Qalatada Al-Shabaab Oo 5Qofood ku toogtay gobolka J/Hoose0 45
Cali Khaliif: “Guinea wax ictiraaf ah oo ay Somaliland u saxiixeysaa ma jirto”….0 45